သိုက် | Top Slot Site | Mobile & Online £5 FREE | £€$800 Bonus :)
Click on the "Cashier" icon, followed by the "အပျငှေ" option.
Freephone: (+) 800-7767-6343 (Australia, Austria, Belgium, တရုတ်နိုင်ငံ, Denmark, Finland, France, Germany, Hong Kong, Ireland, Italy, Japan, Macau, Netherlands, Norway, Portugal, Singapore, Spain, Taiwan, ဗြိတိန်နိုင်ငံ)
Skrill is the new name for Moneybookers, အင်တာနက်ကိုကျော်ပိုက်ဆံလွှဲပြောင်းများအတွက်အဆင်ပြေကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာငွေပေးချေမှုဝန်ဆောင်မှု
အတူဒေသတွင်းဝန်ဆောင်မှု 12 ထောက်ခံဘာသာစကားများနှင့်ကျော်အတွက်ပြည်တွင်းငွေပေးချေမှုရွေးချယ်စရာ 30 နိုင်ငံပေါင်း
ထိုကဲ့သို့သော SMS နှင့်ဖက်စ်ပေးပို့ခြင်းအဖြစ်နောက်ထပ်န်ဆောင်မှု.
မှာတိုက်ရိုက်ဖုန်းကိုထောက်ခံမှု (+44) 870 383 0232 Monday - Sunday 9:00 - 18:00 ဂရင်းနစ်စံတော်ချိန်.
How to fund: Register all your credit/debit card and bank details with Skrill and use them to pay at over 20,000 အွန်လိုင်းဆိုင်များ. This means that you don't need to provide them each time you want to purchase goods and services online.
သငျသညျ depositing ရန်ပုံငွေနှင့်အတူမည်သည့်ပြဿနာမျှရှိပါက, don't worry, you can contact one of our highly trained customer services people from 6:00 am to 23:00 GMT by email or online chat - contact us.
တစ်ဦးကမှတ်ပုံတင်ထားသောကစားသမားမေလ, TopSlotSite ရေးအသိပေးစာပေးခွငျးအားဖွငျ့, တစ်နေ့လျှင်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်သိုက်ကန့်သတ် ထား., တစ်ပတ်သို့မဟုတ်တစ်လ.
မှတ်ပုံတင်ထားသောကစားသမားကနေတစ်ဦးကစာဖြင့်ရေးသားအသိပေးစာအသစ်တစ်ခုကိုသိုက်ကန့်သတ် setting သို့မဟုတ်ရှိပြီးသားသိုက်ကန့်သတ်လျှော့ချ TopSlotSite ဖြင့်၎င်း၏လက်ခံရရှိအပေါ်သို့အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်, or as soon as is practicable thereafter.
အထက်ပါအပိုင်းအောက်မှာတစ်သိုက်ကန့်သတ် ထား. ခဲ့သူတစ်ဦးကမှတ်ပုံတင်ထားသောကစားသမား 1 နိုင်, TopSlotSite ရေးအသိပေးစာပေးခွငျးအားဖွငျ့, increase or revoke the deposit limit afteraminimum waiting period of seven (7) တောင်းဆိုချက်၏အချိန်ကနေရက်ပတ်လုံး, ထိုကန့်သတ်သုညသတ်မှတ်ထားမဟုတ်လျှင်.
TopSlotSite ဒီအပိုင်းအောက်မှာကကစားသမားများအတွက်သတ်မှတ်ထားတဲ့ကန့်သတ်မယ့်မှတ်ပုံတင်ထားသောကစားသမားဆန့်ကျင်နေတဲ့သိုက်ကိုလက်ခံမည်မဟုတ်. Contact Us for self limitation.